Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa: Ani saba kiyyaaf hanga wareegama lubbuuttin yaada - BBC News Afaan Oromoo
Madda suuraa, Mohammad Ademo
Weellisaa Hacaaluun artistoota ogummaa isaaniin waan ummata keessa jiru ibsan keessaa maqaan dhahama
Aartiin qabsoo Oromoo dabalatee dhimmoota hunda keessatti gahee guddaa qaba kan jedhu weellisaa Hacaaluu Hundeessaa bara lakkoofsa Awurooppaa darbe artistoonni Oromoo quuqqaa saba isaanii keessa jiru hanga danda'an beeksisuuf yaalaniiru jedha.
''Akkuma addunyaanuu beeku barri darbe ummanni Oromoo qabsoo dur irraa qabee osoo walirra hin cinne gaggeesaa jiruun isatti jabaatee innis jabeessee bara itti fufedha."
"Ummata Oromoo bahaa hanga lixaa kaabaa hanga kibbaatti tokko godheera. Bu'aan rakkina isaa tokkummaa isaa fideera jedheen yaada'' jechuun kan himu.
'Opride person of the year' jedhamuusaa ilaalchisee yaada BBC'f kenneen, ''Ani akka Oromoo tokkoottii fi akka artistii Oromootti wanta narraa eegamuu fi wanta natti dhagahamu mara gochaan ture, waayee saba kiyyaa hanga lubbuun koo jirtuttis nan godha.''
Hacaaluun beekkamtii argateef hundeessaa Opride.com gaazexessaa Mohaammad Ademoo galateeffateera.
'Ani saba kiyyaaf hanga wareegama lubbuuttin yaada waan ta'eef waan xinnoo kana hojjedhee qalbii hawaasa kana mara argachuun koo waan guddaadha. Garuummoo namni hojii hojjeteef gaafa beekkamtiin kennamuuf namni hin gammadiin hin jiru' jechuun gammaduus dubbata.
Sadarkaa lammaffaatti 'Person of the year' jedhamuun kan filaman Pirezidantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ilaalchisee Hacaaluun yaad kenneen filatamuu isaanirraa mormii hin qabu jedha.
''Akka Oromoo tokkootti haasa'uuf obbo Lammaan jaarmiyaa DHDUO keessatti umurii kiyyaan amala addaa argee hin beekne nama fidedha. Nama aantummaa ummataa qabu dha. Akkaataan isaan ummata kana itti hoogganaa jiran waan addaati, waan dhaaba sana keessatti argamee hin beeknedha, kanaaf mormii hin qabu.''
Jarmiyaa maqaa Oromootiin jiranii fi hoggantoota isaanii ummata Oromoorraa roorroo dhowwaa jiran hunda akka kabajus himeera.
Aartistoonni Oromoo akkuma amma itti jiraniin waan yeroon hayyamu osoo hin taane waan yeroon gaafatu hojjechuu qabu, Ummanni Oromoos kan isa baasu wal dhagahuu dha kan jedhu Aartisti Hacaaluun ajandaa ormi kenneef hojiirra olchuurra ajandaa Ormatti kennuu qaba sabni kun, saba guddaadhas jedha.
Weellisaa Haacaaluu Hundeessaa wantin saba koof hojjedhe xinnoodha jedhe
'Opride Oromo Person of the year'
Opride.com bara 2008 madda odeeffannoo fi xiinxala dhimmoota adda addaa irratti dhiheessuu akkasumas jiruu fi jireenya Oromoo afaan Ingiliziin addunyaan gahu kaayyeffatee gaazexeessaa Mohammad Ademoon Ameerikaa magaalaa Meenisotaa Duluuzitti hundaa'e.
Akka Mohaammad jedhutti erga bara 2010'nii Opride.com waggaa waggaan namootaa fi dhaabbilee Oromootaaf olmaa guddaa oolan, sagalee Oromoo guddisanii dhageessisan, hojii dhuunfaa hojjetaniin Oromoota biroo boonsanii fi namoota kaan onnachiisaniif beekkamtii kenna.
Baranas yeroo saddeettaffaaf barana filannoo taasifameen namoota lama filateera. Mohaammad barri 2017 ummata Oromoof bara haalaan hammaataa ture jedha.
''Yeroo rakkoo fi gadadoo kana keessa ummata Oromoo irratti duulli banamee, kaan ajjeefamee haala biyya sana keessatti mul'atee hin beekneen ummanni kuma 700 ta'an qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaa'aniiru. Yeroo rakkisaa sana keessa namoonni sii jirra, jirra, hin dhumne hin dhumnus jechaa turan namoota baayyee ta'anis sadarkaa duraatti artistii Hacaaluu Hundeessaa Boonsaa filanneerra'' jedha.
Akkaataa filannoo marsariitii Opride kanaan beekkamtii 'Opride Oromo Person of the Year' kan argatan:
Bara 2010 Namoota lama
Bara 2011 Rogeeyyii lama
Bara 2012 hidhamtoota siyaasaa Oromoo
Bara 2013 Toltuu Tufaa, gahee guddina Afaan oromoof taasifteen
Bara 2014 barattoota Oromoo, mootummaa mormuu keessatti qooda fudhatanif
Bara 2015 wareegamtoota Oromoo, mormii waggoota darbaniin aarsaa kaffalanif
Bara 2016 dhaloota qubee, qabsoo ummata Oromoo finiinsan jedhuun filataman.
Mohaammad Hacaaluu yeroo ibsu dargaggeessa kutataa, onnataa fi jajjabee kan waa takka boodatti hin deebine dha jechuun hima. Wanti inni godhe namoota baayyee onnachiisee abdii horuun qeerroon mirga isaaf akka falmu waan kakaaseef oolmaa inni aartiidhaan ummata Oromoof ooleef Opride Oromoo cimaa bara 2017 ittiin jechuu isaa ibseera.
Waltajjiiwwan garaa garaarratti Hacaaluun haasawaan bifa seenaa biyyatti xiInxaluu fi miira namoota hedduu dadammaqsan taasisuun namoota baayyee biratti kabajaa fi fudhatama guddaa argachuu isaas haasaa mooraa baqattoonni bira dhaqee taasise akkasumas marii artistoonni hoggantoota mootummaa naannoo Oromiyaa waliin taasisan irratti haasa'e akka wabiitti ka'uu danda'as jedha.
Madda suuraa, Addisu Arega
Obbo lammaa Magarsaa waggaa tokkoofi ji'a muraasa dura ture dura ta'aa DHDUO ta'anii kan filataman
Bara 2017 mirga Oromoof falmuun sagalee ummataa dhagahuu fi dhageessisuun oolmaa guddaa oolan keessaa sadarkaa lammaffatti kan filatamani turan immoo Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dha.
Obbo Lammaan wanta ummanni waggoota 27'f hawwaa ture dhaaba siyaasaa bulchan fedha ummata Oromoof akka dhaabatu gochuun haala kanaan dura hinturreen jijjiirama fidaniin 'Opride Oromo Person of the Year' jedhamuu isaanii Mohaammad dubbata .
''Mirga ummata keenyaaf ni falmanna, nuun kan as nu fide ummata, wayita kakuu galluus ummata keenya tajaajiluuf malee gooftaan biroo Finfinneedhaa akkasan godha akka nuun jedhuuf miti, yeroon sun darbeera, uummanni Oromoo biyya kana keessatti kabaja, aangoo fi bakka isaaf malu argachuu qaba jedhee nama dhaaba san keessatti yeroo duraatiif afaan guuttatee qoma dhiibee nama dubbate dha'' jechuun Mohammad kan himu.
Jijjiirama obbo Lammaan hooggansa naannoorra darbee biyya tasgabbeessuu danda'u ijaaranif beekkamtii fi kabaja kennuun barbaachisaa waan ta'eef kabaja kana kennineefis jechuun kan BBC'tti dubbate.
Filannoon kun deeggartootaafi qorannoo namoota muraasa waliin godhameen namoota ji'a 12 keessatti Oromoof waan toltuu dalaguun sirbee ummata Oromoo boochise, dubbatee qalbii ummataa kanaa booji'e, eenyutu ummata kana onnachiise jedhanii odeeffannoo hawaasarraa erga sassaabanii booda murtee dhumaa akka kennan gaazexeessaa Mohaammad dubbateera.
'Obboleettiinkoo lakkuu kalee ishee tokkoofi kennaa jireenyaa naaf kennite'